China tebụl n'elu feeder emepụta na suppliers | Baiyi
Aha aha: tebụl-top feeder
:Dị: BY-TF01-300 / BY-TF02-400 / BY-TF04-400
Njirimara:deft imewe, adaba na Mbupu, elu na ọdabara ike, mfe na-arụ ọrụ, na-eri irè. Ohere maka akwụkwọ, labeelu, akwụkwọ igbe, nkịtị plastic akpa wdg O nwere ike na-ike na TIJ ngwa nbipute, CIJ ngwa nbipute wdg, ma ọ bụ labeling usoro, laser ebi, nke ọfiọkde ebi akwụkwọ iche iche nke ederede, oyiyi wdg anya-akara.
Usoro nke tebụl-top feeder adopts esemokwu ụkpụrụ ịghọta ngwaahịa nri. Ọ bụ nhazi desktọọpụ na uwe maka obere oghere. Ejikọtara usoro ọrụ atọ a nke ọma: nri ngwaahịa, ịkwaga na nchịkọta akpaaka. Ka ọ dị ugbu a, anyị nwere ndị na-eri nri tebụl atọ a: 1, onye na-eri nri tebụl (Nlereanya: BY-TF01-400); 2. tebụl-isi itunanya ụdị feeder (Nlereanya: BY-TF04-300); 3. ọgụgụ isi oche elu-esemokwu feeder (Modeldị ： BY-TF02-400).
1. "desktọọpụ esemokwu feeder" adopts anaghị agba nchara maka dum igwe ahu. Esemokwu ude belt dị ka udia ike, ọ na-onwem na elu esemokwu belt kenha di iche iche nke esemokwu ịpị belt, nke na-eme ya ihe ojiji dị ukwuu, uwe maka iche iche nke plastic akpa, karịsịa ìhè, mkpa, adụ ihe onwunwe mbukota akpa. Ngwaahịa kachasị mkpa nwere ike ịbụ 0.02mm. ọ bụ na cantilever Ọdịdị, loading na wearable belt na-agbanwe agbanwe bụ nnọọ adaba.
2. "desktọọpụ iru uzo ụdị feeder" adopts "itunanya nkewa" ụkpụrụ, otu esemokwu feeder dị ka udia ike, ọ dịghị esemokwu na ịpị belt, nke na-eme ka ọ ona maka "oké, ike na arọ" akwụkwọ igbe, kaadị na efere ngwaahịa. Ka ọ dị ugbu a, eriri weara bụ nke kacha nta, esemokwu esighị ike ma dịkwa mfe ijikwa, yabụ nri nri na-adịgide adịgide na ọsọ ọsọ. Ọrụ nwere ike tụlee iji wụnye esemokwu na ịpị belt, nke bụ uwe maka iche iche nke plastic akpa. Eriri abụọ ahụ kwekọrọ ekwekọ. Ọ bụ na ngwa kachasị dị ukwuu, obere pere mpe, ọkụ dị arọ, ọsọ ọsọ na akụrụngwa kachasị ike. Oke ọkpụrụkpụ maka ngwaahịa nwere ike ịbụ 10mm.
3. "Intelligent oche-n'elu esemokwu feeder" dị iche na "oche-n'elu esemokwu feeder" dabere na ịmụta 3pcs ma ọ bụ ọbụna karịa obosara ọdịiche esemokwu eriri dị ka udia ike na onwem na esemokwu ịpị belt modular nke dị mfe ịgbanwe na ịgbanwe. Maka nke a, meziri ka ike onye na-eri nri dịkwuo mma, arụmọrụ yana ahụmịhe ojiji ya. Ngwaahịa obosara nwere ike ịbụ site na 25mm ruo 400mm. Ọzọkwa, esemokwu esemokwu belt modular bụ na nọọrọ onwe ha micrometer ukpụhọde, ngwaahịa mgbanwe bụ nnọọ adaba, ọkpụrụkpụ ukpụhọde bụ nnọọ kpọmkwem.
1. tebụl-top esemokwu feeder ịbịaru
2. tebụl-n'elu baffle-ụdị feeder ịbịaru
3. Ọgụgụ isi oche-n'elu esemokwu feeder
1. tebụl-top esemokwu feeder oke
A. Dimension: L * W * H = 1700 * 760 * 210mm (ebu eriri obosara 400mm)
B. aro: 50KG
D. Ike: ihe dị ka 500W
E. arụmọrụ: 0-300pcs / min (were 100mm ngwaahịa maka akwụkwọ)
F. na-arụ ọrụ ọsọ: 0-60m / min (mgbanwe)
G. dị ngwaahịa size: L * W * H = (60-400) * (80-380) * (0.05-3) mm
H. ọsọ ọsọ usoro: Frequency akakabarede ma ọ bụ brushless DC ọsọ ukpụhọde
I. moto: ntụgharị oge ma ọ bụ moto DC.
J. dị ngwaahịa: iche iche nke akwụkwọ, plastic akpa, kaadị, kpọọ wdg Karịsịa uwe maka ìhè, na mkpa na juu plastic akpa.
K. igwe ahụ: igwe anaghị agba nchara
L. echichi usoro: onwe echichi, oche-n'elu.
M. ọrụ nhọrọ: ofufe na agụụ agụụ, auto collection, akpaaka-ojuju.
2. tebụl-top baffle-ụdị feeder oke
A. akụkụ: L * W * H = 1300 * 635 * 150mm (ebu belt obosara 300mm)
B. aro: 35KG
E. arụmọrụ: 0-300pcs / min (iri 100mmproduct size ka ihe atụ)
F. na-arụ ọrụ ọsọ: 0-60m / min (nọgidere na-agbanwe)
G. dị ngwaahịa size: L * W * H = (60-300) * (60-280) * (0.1-3) mm
H. Usoro njikwa ọsọ: ntụgharị oge ma ọ bụ ngbanwe ọpụpụ DC.
I. moto: ntụgharị oge ma ọ bụ moto DC
J. dị ngwaahịa: iche iche nke akwụkwọ, plastic akpa, kaadị, labeelu wdg karịsịa uwe maka oké, ike na arọ akwụkwọ igbe, kaadị, efere wdg
L. nwụnye usoro: ntinye onwe ya, desktọọpụ.
N. ọrụ nhọrọ: fans of agụụ agụụ, auto-collection, auto-ojuju.
3. ọgụgụ isi oche-top feeder
A. akụkụ: L * W * H = 1700 * 760 * 210mm (Conveyor belt wide 400mm)
F> eriri na-arụ ọrụ ọsọ: 0-60m / min （na-aga n'ihu ukpụhọde）
G. dị ngwaahịa size: L * W * H = (60-400) * (30-380) * (0.05-3) mm
H. Usoro mgbanwe ọsọ ọsọ: ntụgharị oge ma ọ bụ ngbanwe ọpụpụ DC.
I. Motor: Frequency akakabarede ma ọ bụ brushless DC moto
J. Dị ngwaahịa: iche iche nke akwụkwọ, plastic akpa, kaadị, kpọọ, mbukota igbe wdg
K. igwe ahụ: igwe anaghị agba nchara.
M. Nhọrọ ọrụ: ofufe na agụụ agụụ, auto-collection, akpaaka-ojuju.
Nke gara aga: ọkọlọtọ feeder
Osote: Nri & TTO thermal ebi akwụkwọ niile na otu